ISigaba esiPhakathi IiShedyuli zoMsebenzi
Ukumisela umgaqonkqubo kuba namagingxi-gingxi. Yinkqubo yokuqonda nokucacisa ukuba lo mgaqonkqubo uthini kanye kanye kunye neyokubonisana nabantu, nkqubo leyo ethatha ixesha elide. Siye sifunde kule nkqubo ze simana siyitshintsha ngokwezimvo esizifumanayo ukwenzela ukuba le nkqubo ilungele iimeko ngeemeko ezahlukileyo. Into esiyifundileyo kule minyaka ilishumi nangaphezulu idlulileyo kukuba kufuneka sibonisane, simamele ze sifumane isisombululo kwimingeni esijongene nayo. Iishedyuli zomsebenzi zisisiphumo saloo mgaqonkqubo kunye nalo nkqubo ethe yasifundisa izinto ngezinto. Isifundo seLitheresi neseziBalo kwakunye nezinye izifundo zeSigaba seSiseko kunye nesiPhakathi zizifundo ezibalulekileyo esigxininise kuzo siliSebe lezeMfundo leNtshona Koloni. Sifuna ukuqinisa izikolo zamabanga aphantsi ze sidale amathuba esiseko esomeleleyo ukuze siphucule amathuba abafundi okuphumelela kumakhondo abafuna ukuwalandela. Sikholelwa ukuba esi siseko singaziphucula iziphumo zelitheresi nezesifundo sezibalo, nezinga lokupasa ngokubanzi. UMzantsi Afrika lilizwe elisakhulayo yaye sivile ukuba, kule minyaka yeenkqubo ezichaphazela ihlabathi lonke, amazwe asaxakeke nenkqubo yokuzilinganisa namazwe aphuhlileyo kufuneka evelise izakhono ezifunekayo. Ngoko ko ilizwe elifana neli lethu lingakwazi ukukhuphisana nala mazwe makhulu yaye lingazinza. Into ebalulekilyo kukuba sibe nabafundi abakwaziyo ukufunda, ukubhala kwakunye nabakonwabelayo ukufunda okanye ukuhamba isikolo. Ixabiso lezentlalo lesikolo linokuphuculwa ukuba ngaba iinzame zezikolo zinokukhuliswa. Iishedyuli zomsebenzi ziza kuthathwa njengenxalenye yezixhobo zePhulo, iFoundations for Learning. Zithathwa njengesixhobo sokuxhasa nokunika intsingiselo kweli phulo. Nanjengokuba kukho uluvo lokuba amaphulo zizinto nje ezimana ziphinda-phindwa, iishedyuli zomsebenzi ziza kuba sisixhobo senkxaso eza kunika intsingiselo ekwakhiweni kweziseko zelitheresi kunye nesifundo sezibalo. Lilinge lokubonelela ngezikhokelo kootitshala ngendlela yokufundisa kusuku ngalunye lwesikolo. Iishedyuli zomsebenzi ziza kuthunyelwa ezikolweni ukuze izikolo zinike izimvo okanye iingxelo zazo malunga nazo. Kananjalo ziza kuvavanywa kwizikolo ezithile ezikhethiweyo. La maxwebhu aza kukhutshwa njengesikhokelo ngoJanuwari 2009 yaye kucelwa ukuba izikolo zingenise izimvo zazo ngazo ngoJulayi 2009. Ezi shedyuli zomsebenzi ziza kuvavanywa ezikolweni kwangoJulayi 2009. Zonke izimvo ezingenisiweyo ziya kunceda ekubeni ziphinde zisetyenzwe okanye ziphuhliswe ngakumbi ezi shedyuli zomsebenzi. ISebe lezeMfundo leNtshona Koloni liziko elisafundayo yaye lizama ngawo onke amaxesha ukuba liyiqonde imeko elingqongileyo. Le nkqubo yokufunda iyaqhubeka ngenxa yento yokuba izinto zisoloko zitshintsha ngokukhawuleza. Xa ke sikuthathela ingqalelo oku, masazi ukuba isimemo sokufumana izimvo kunye nesovavanyo lilinge elibonisa into yokuba siliziko elifundayo ngokuthi siphuhlise amaxwebhu asekelwe kwizimvo zootititshala kwakunye nezabantu abakwamanye amacandelo ahlukileyo kwiphondo lethu. Siyazi ukuba ukusebenza ngendlela efanayo akusebenzi okanye akubi naziqhamo zihle. Siyazi kananjalo ukuba kufuneka simamele, sithethe ze sifumane izisombululo kwimingeni yethu. Uvavanyo lwezi shedyuli ezikolweni kunye nesimemo sokuba nisinike izimvo zenu kuza kusenza ukuba sibonisane, simamele ze sifumane izisombululo njengoba siqhubeka sisebenzela ukufumana inkqubo yemfundo esemgangathweni elungiselelwe bonke abafundi bethu.
Gqr. S. Naicker, Umlawuli oyiNtloko: Icandelo loPhuhliso lweKharityhulamu
AMABANGA APHAKATHI IBAKALA 4 UKUYA KUTSHO KWIBAKALA 6 MALUNGA NESHEDYULI YOMSEBENZI Ezi shedyuli zomsebenzi zinika iingcebiso malunga neendlela-ndlela zokufundisa iTeknoloji, zingqala ngqo kweyona nto anokuyifunda umfundi kwesi sifundo, kwaye zikwadandalazisa iindlelandlela zokuhlola umfundi. Olu thotho lulandela inkqubo entsha yemfundo nesekelwe kwiNkcazelo yeKharityhulamu yeSizwe. Ezi shedyuli zomsebenzi zikwahlahla indlela yokuhlangabezana neziPhumo zeziFundo, zibonisa nendlela emazithungelane ngayo nemiGangatho yoVavanyo ezi ziphumo (xa kufundiswa, xa kufundwa, naxa kusenziwa uvavanyo). Asikuko nokuba le ndlela intsha yokufundisa nokufunda ithabatha indawo yolwaa xwebhu lwesiqhelo lomgaqo-nkqubo wemimandla yezifundo, koko nje igqalise ekuncedeni utitshala ukuze afundise iTeknoloji ngokweenjongo zalo mgaqo-nkqubo. ITEKNOLOJI ITeknoloji kukusetyenziswa kolwazi, izakhono nezixhobo ezixhibe ukuhlangabezana neemfuno zabantu ngokuthi kuphuhliswe izisombululo zeengxaki ezahlukeneyo, oko kusenziwa kungabhoxwanga isimo sentlalo okanye soko kusingqongileyo. Ngoko ke abafundi mababonise ubuchule obungqamene nale nkcazelo kwesi sifundo ukuze baphumeze iinjongo zeNkcazelo yeKharityhulamu yeSizwe ukusukela kwiBakala R ukuya kuthi xhaxhe kwiBakala 9. Ngoko ke iishedyuli zomsebenzi zigqalise kobu buchule bulandelayo: · Ukuqinisekisa ukuba ootitshala bacacelwe ngokufanayo malunga neziPhumo zeziFundo, ndawonye nemiGangatho yoVavanyo; · Ukuqinisekisa ukuba ootitshala bagxininisa kwisikhokelo esigunyazisiweyo esiqulathwe yiNkcazelo yeKharityhulamu yeSizwe; · Ukuqinisekisa ukuba ootitshala beli phondo bahamba ngenyathelo elinye xa befundisa esi sifundo. Ixesha elabelwe esi sifundo / amaxesha esifundo ITeknoloji yabelwa i-8% kwiiyure ezingama-26½ zomjikelo weentsuku ezintlanu. Esi sifundo masabelwe iiyure ezi-2 ngeveki. Ngokwezi shedyuli, ootitshala mabasebenzise iiphiriyodi ezimbini (inye itsale kangangeyure) ngomjikelo ngamnye weentsuku ezintlanu, ukuze baqinisekise ukuba balisebenzisa ngokufanelekileyo ixesha lokufundisa nokufunda esi sifundo. Isicwangciso seBakala ngalinye sahlulwe ngokwamaqaqobana amane eephiriyodi zeeveki ezili-10. Ezi veki zidweliswe ukusukela kwiVeki 1 ukuya kuthi xhaxhe kwiVeki 40. Olu hlobo ibunjwe ngalo ishedyuli yebakala ngalinye luya kwenza kube lula ukubuya uyisebenzise kwakhona (njengesikhokelo) xa ucwangcisa izifundo minyaka le. Ngoko ke izikolo mazijonge inani leeveki ezikhoyo kwikota nganye, zandule zihlengahlengise amaxesha ezifundo ngokufanelekileyo ukuze ekugqibeleni kuphuhle inkqubo eluqilima yokufundisa nokufunda, ndawonye novavanyo lwekota nganye yonyaka. Amalungiselelo katitshala Ootitshala mabasebenzise ishedyuli yomsebenzi kunye nesiKhokelo sikaTitshala ukuze bacwangcise isifundo ngasinye ngokucacileyo nangokuchanekileyo. Siyabacebisa ukuba balungise izixhobo ezifunekayo kwangethuba, kwaye baqinisekise ukuba sele egqityiwe onke amanqanaba esicwangciso somsebenzi wekota nganye kwakwikota eyandulelayo. Iziphumo zomsebenzi ocwangciswe kwangethuba ziba zihle kakhulu kuba xa kunjalo kukhula umoya omhle wobumbano kwalapha eklasini, apho abantwana bonwabileyo ngelixa bezuza ulwazi, kungekho zingxaki zingenakusonjululwa. ITeknoloji sisifundo esimele kufundiswa ngokuthi kumana kucatshulwa kwimiba echaphazela izinto-yinto empilweni yomntu, into ethetha ukuthi izinto ezijikeleze ubomi bomntu mazisoloko zisetyenziswa njengomxholo.
Esi sifundo sisebenzisa kakhulu izandla nengqondo, ngoko ke abafundi mabasoloko besenza imisebenzi yezandla. Ootitshala mababakhuthaze kangangoko abafundi ukuba babonise umdla kwinto abayenzayo ngalo lonke ixesha. Ngokunjalo, luxanduva lootitshala ukuvula amathuba azukileyo okufunda nokufundisa, apho wonke umfundi aya kuziva ekhululekile kwaye enomdla kuyo yonke into eyenziwayo apha eklasini. Siyathemba ukuba ezi shedyuli ziya kuba luncedo kuwe titshala nawe mfundi. UMBULELO Sibamba ngazibini kootitshala nakubacebisi ngemiba yekharityhulamu, abathe bona bazidina belungisa ezi shedyuli zomsebenzi zamaBanga aPhakathi.
ICandelo leMicimbi yeKharityhulamu: GET
ISHEDYULI YOMSEBENZI WETEKNOLOJI IBAKALA 5 IKOTA 1 UBUCUKUBHEDE BOKWENZA OKUTHILE NOKWAKHEKA KWEZINTO IVEKI 1 Iphiriyodi 1 neyesi 2 LO &amp; AS IMIGANGATHO YOHLOLO NOMXHOLO OFUNDISWAYO Intshayelelo malunga neTeknoloji kwiBakala 5  Nika intsingiselo yala magama/mabinzana: o Iinkqubo zobugcisa o Uluntu o Okusingqongileyo o Inkqubo yokuyila o Unxibelelwano  Xoxa ngenkqubo yeTeknoloji.  UVavanyo loMyinge TG
2 Iphiriyodi 1 neyesi 2
5.1.1.1 5.1.1.2 5.2.2.1 5.3.1.1 5.3.2.1
Umxholo: Ukwenziwa kwezinto Ibali eliyinyani elingemvelaphi yezinto: Ukubumba umfanekiso wento ethile usebenzisa udongwe/intlama ethile efana nodongwe ISigaba A: Ukulungisa amathambo awophukileyo ­ mandulo/ kule mihla ISigaba B: Ingaba wenza njani uSobugqi (ophanda ngezilwanyana ezazisa kuphila mandulo, zingasaphili ngoku) xa eqingqa imizila kaxam wamandulo? Uphando malunga nendlela izinto eziguquguquka ngayo ukuze ekugqibeleni kubonakale ifuthe leTeknoloji ngokuya ehamba amaxesha  Yazisa intsingiselo yala magama/mabinzana: o Izinto eziluncedo o Izinto ezingeloncedo o Izisombululo zobugcisa o Iimveliso zobugcisa o Iimveliso esele zikho o Inkangeleko/imbonakalo yomfanekiso o Ubucukubhede bokwenziwa kwento o Ukubumba umfanekiso ngodongwe o Ukutshintsha into ngokupheleleyo ibe yenye into o Imveliso o Elungiselelweyo o Iziphumo ezihle o Iziphumo ezibi o Uphuhliso lobunzululwazi o Umzobo weengcamango (i-mind map)  Fundisa abafundi ngokuzotywa kweengcamango
Fundela abafundi ibali eliyinyani elibonisa imeko ethile apho kwakhe kwabunjwa khona umfanekiso wento ethile ngodongwe/ngentlama ethile efana nodongwe. Kwakhona, bazobele iingcamango ezibubucukubhede bezinto ezenziwayo xa kubunjwa umfanekiso wento ethile ngodongwe ukuze kuphuhle ifuthe leTeknoloji ngokuya ehamba amaxesha.
3 Iphiriyodi 1 neyesi 2
5.1.3.1 5.1.3.2 5.1.3.3 5.1.4.2 5.2.2.1
Ubucukubhede bokulungiswa kwezinto eziza kusetyenziswa ekwenzeni/ekubumbeni into ethile  Yazisa abafundi ngentsingiselo yala magama/mabinzana: o Ingxaki o Amanyathelo emakalandelwe xa kusenziwa okuthile o Ukudibanisa o ukugqibezela o Unciphiso lwenkukuma/lwelahleko/lwenkcitho o Phicotha/vadlakanya/hlalutya/jongisisa o Ukuphucula/ukuhombisa  Lungisa izixhobo eziza kusetyenziswa ekubumbeni umfanekiso womdongwe  Xoxa ngeendlela zokhuseleko xa kubunjwa umfanekiso wento ethile.  Qinisekisa ukuba indawo ekuza kusetyenzelwa kuyo ikhuselekile.  Bumba umfanekiso usebenzisa udongwe/intlama efana nodongwe.  Bhala phantsi amanyathelo owalandelayo xa ubumba umfanekiso. Bhala namanqakwana aloo nto uyenzayo xa uwuphucula/uwuhombisa umfanekiso lowo.  UVavanyo oluseSikweni.
4 Iphiriyodi 1 neyesi 2
5.1.3.1 5.1.5.2 5.2.2.1
Ukuthetha/ukuqhagamshela ngenkqubo yobugcisa ekuza kuba lula ukuyilandela  Yazisa abafundi ngentsingiselo yala magama: o Uqhagamshelwano/unxibelelwano/ingcaciso o Iposta o Imizobo  Xoxa ngeempawu zeposta enomtsalane.  Zoba iiposta ezibonisa `ubucukubhede bokwenziwa/bokubunjwa komfanekiso wento ethile ngodongwe/ngentlama efana nodongwe.  Dwelisa amanqakwana ezinto ozenzayo xa uphucula/uhombisa umfanekiso.
5 Iphiriyodi 1 neyesi 2 5.1.1.2 5.3.3.1
Izixhobo nezinto ezikumila kuthile ezisetyenziswayo kwezolimo, ndawonye neengxaki ajongene nazo amafama asakhasayo kuba engathathi-ntweni/edinga ezinye zezixhobo ezibalulekileyo kwezolimo.  Yazisa abafundi ngentsingiselo yala magama/mabinzana: o Ithuba o Iziqhamo/iziphumo o Ukuba namathuba/ukufikelela/ukuba nako o Imisebenzi yezobugcisa o Amafama asakhasayo o Ukukhetha amacala  Sebenzisa imifanekiso ebonisa imiba yezolimo: umzekelo ebonisa izixhobo eziphambili kwezolimo; ebonisa neemeko apho kukhethwa khona amacala, abanye bevinjwa amathuba lo gama abanye bewafumana (dandalazisa neziphumo zalo qulukubhode).  Cacisa umahluko phakathi kwento eyingxaki, into eyimfuno, nento elithuba.  Xoxa ngezixhobo ezilapho emfanekisweni, ucacise ukuba isixhobo ngasinye osibonayo sanelisa eyiphi imfuno yezolimo.  Cacisa inkangeleko/imbonakalo yesixhobo ngasinye osibonayo emfanekisweni, ze uxhase ukuba uza kusibona kanjani, usichaze njani.
6 Iphiriyodi 1
Izakhono zokuqhagamshela ngemizobo ngokubhekiselele kwiintlobo ngeentlobo zezinto ezikumila kuthile zokusebenza  Yazisa abafundi ngentsingiselo yala magama/mabinzana: o Iilebhile o macala-mabini o Ukuphucula o peyinta o Iintlobo-ntlobo zezakhiwo/zezinto ezikumila kuthile zokusebenza o Unxulumano phakathi kwezinto ezisetyenziswayo ukwenza loo nto ithile o Umthwalo o Inkxaso  Sebenzisa ibalana okanye imifanekiso xa uchaza iintlobo ngeentlobo zezakhiwo/zezinto ezikumila kuthile zokusebenza ezahlukeneyo .  Chaza unxulumano phakathi kwezinto ezisetyenzisiweyo ukwenza/ukwakha eso sixhobo sithile/loo nto ikumila kuthile yokusebenza, kunye naloo nto siyithwalayo/siyigcinayo.  Cacisa umahluko phakathi komsebenzi waloo nto ikumila kuthile yokusebenza ixhasa loo nto iyithwalayo/iyigcinayo, kunye nemisebenzi yezinye izinto zokusebenza ezikwamile ngendlela ethile.  Phuhlisa izakhono sokuqhagamshela ngemizobo ngokuthi uqingqe inkangeleko/umfanekiso wento emacala-mabini.  Bonisa ubuchule bokukwazi ukuphawula nokuhombisa umfanekiso usebenzisa imibala.
7 Iphiriyodi 1 neyesi 2
Izakhono zokuqhagamshelana/zokunxibelelana nabanye ngemizobo  Sebenzisa izixhobo ezichanekileyo zokuzoba ukuze ubonise isakhono onaso sokuqhagamshela ngemizobo.  Yiza nezixhobo zokuphuhlisa izakhono zokuzoba.
8 Iphiriyodi 1 neyesi 2
5.1.5.1 5.1.5.2 5.2.1.1
Sebenzisa izakhono onazo zokuqhagamshelana/zokunxibelelana nabanye ngemizobo wenze iposta  Yazisa abafundi ngentsingiselo yala magama/mabinzana: o izakhiwo/Izinto ezikumila kuthile zokusebenza o Ifreyim/umphandle wento o Iqokobhe o Qinileyo o Umthwalo  Bhala phantsi inkcazelo yendlela ofuna yenziwe ngayo loo nto ikumila kuthile yokusebenza iza kuxhasa umthwalo othile ngokubhekiselele kwezolimo.
9 Iphiriyodi 1 neyesi 2
Ukuzihlola, abafundi bayahlolana, uhlolo olwenziwa ngutitshala  Yazisa abafundi ngentsingiselo yala magama/mabinzana: o Ukuzihlola o Abafundi bayahlolana o Ukuhlolwa ngutitshala o Irubrikhi  Yila ipowusta ebonisa umzobo waloo nto ikumila kuthile yokusebenza imacala-mabini (ingu2D).  Ncedisa ekwenzeni irubrikhi yokuphonononga nokuhlola le powusta.  Vula ithuba lokuba umfundi ngamnye azihlole, uphinde uvule nelokuba bahlolane. UMSEBENZI 1 WOVAVANYO OLUSESIKWENI
10 Iphiriyodi 1 neyesi 2
5.1.5.2 5.1.3.2 5.2.1.1
Yakha loo nto ikumila kuthile yokusebenza kuya kuba lula ukuyenza neza kuxhasa/kuthwala umthwalo  Yazisa abafundi ngentsingiselo yala magama/mabinzana: o Imizekelo / Imizekelo yezinto ezakhiweyd o Ukuthatha umlinganiselo o Ukuphawula o Ukusika o Ukudibanisa o Iintlobo-ntlobo zezinto ezikumila kuthile zokusebenza  Yakha loo nto ikumila kuthile yokusebenza kuya kuba lula ukuyenza neza kuxhasa/kuthwala umthwalo. Itoti yeCoke ebubukhulu buyi300 mm (kunye nezifunxi ezimbalwa zephepha) zingawulungela lo msebenzi. Yizalise ngamanzi le toti.  Yiza nezixhobo zokusika, iphepha, nesincamathiseli/iglu.
ISHEDYULI YOMSEBENZI WETEKNOLOJI IBAKALA 5 IKOTA 2 UBUCUKUBHEDE BOKWENZA/BOKWAKHA INTO ETHILE IVEKI 11 LO &amp; AS IMIGANGATHO YOHLOLO NOMXHOLO OFUNDISWAYO Umxholo: Ukwenza imveliso IMEKO ENGUMZEKELO: Niza kuba nosuku lokwenza intengiso esikolweni. Iklasi nganye kufuneka inyuse ingxowa-mali ukuze kuthengwe ikhompyutha yeklasi. Ngoko ke yilani umfanekiso wesikhongozeli eniza kusithengisa ngolu suku nisebenzisa intlama eyenziwe ngephepha. Kufuneka niwuchaze ngokucacileyo umsebenzi wesikhongozeli eso, nichaze nokuba simele kusetyenziswa ngoobani, kanjani. UHLAZIYO  Yazisa abafundi ngentsingiselo yeli binzana: o IPotfoliyo yeprojekthi  Hlaziya intsingiselo yeli binzana `ubucukubhede bokwenza into ethile' (umzekelo: kuxa utshintsha imo yezinto ezithile ukuze ekugqibeleni zibe yimveliso). TG
Iphiriyodi 1 neyesi 2
12 Iphiriyodi 1 neyesi 2
5.1.3.1 5.1.3.2 5.1.3.3 5.2.2.1
Ubucukubhede obulula obenzayo xa utshintsha imo yezinto ezithile ukuze ekugqibeleni zibe yimveliso).  Yazisa abafundi ngentsingiselo yala magama/mabinzana: o Ukubumbela o Ijeli o Itshokolethi o Ukubumba umfanekiso usebenzisa udongwe/intlama efana nodongwe o Intlama yephepha o Ifektri/ apho kwenziwa khona imveliso  Lungisa zonke izixhobo zokutshintsha (umgubo) wejeli/wetshokolethi ukuze ube yimveliso ebumbeneyo.  Wabonise uwacacise gca onke amanyathelo owalandelayo xa ubumbela (ijeli/itshokolethi) entweni ethile.  Zibonise neendlela zokhuseleko emazilandelwe xa kubunjelwa (ijeli/itshokolethi) entweni ethile.  Dwelisa zonke izithako ndawonye namanyathelo emakalandelwe kulo msebenzi.
13 Iphiriyodi 1 neyesi 2
Iimveliso ezibunjelweyo nekangeleko yazo  Yazisa abafundi ngentsingiselo yala magama/mabinzana: o o Iimveliso ezibunjelweyo Ukwenza imveliso (ekulula ukuyenza) usebenzisa ingqokelela yezinto
Qokelela imifanekiso yemveliso ezibunjelweyo, ezisetyenziswa ekhaya nezisetyenziswa esikolweni, oza kuyiphonononga.  Chonga iimpawu / izinto eziphambili kwinkangeleko yemveliso nganye oyibonayo kule mifanekiso.
14 Iphiriyodi 1
5.1.3.1 5.1.3.2 5.1.3.3 5.2.2.1 5.3.1.1
Yenza isikhongozel ngentlama yephepha, wandule usithelekise nesamaxesha amandulo. Phinda usithelekise nezo udla ngokuzibona zisetyenziswa kwiinkcubeko ngeenkcubeko.  Yazisa abafundi ngentsingiselo yala magama/mabinzana: o Ukwahlukanisa o Ukubumba o Ukwenza/ukuqala into ethile o ukugqibezela o Iguquguqulwe yalungelelaniswa ngokwexesha nenkcubeko  Cacisa ukuba yinto enjani intlama yephepha, wandule ubonise imizekelo yeemveliso ezenziwe ngayo.  Xoxa ngeendlela izikhongozeli eziguquguquka ngazo ngokuya ehamba amaxesha, ucacise gca ukuba zahluka njani kwindlela ezazisakuba ngazo kwiinkcubeko ngeenkcubeko. Nika nemizekelo.  Bonisa amanyathelo owalandelayo xa usenza imveliso ngentlama yephepha.  Bonisa iindlela zokusebenza ngendlela ekhuselekileyo necocekileyo xa usebenzisa izixhobo. Fundisa ngeemeko eziyimizekelo, ngenkcazelo yendlela emayenziwe ngayo into, nangeenkcukacha zento emayenziwe  Yazisa abafundi ngentsingiselo yala magama/mabinzana: o Injongo yobugcisa o Isisombululo  Yiza nesikhokelo/nesibonelo semveliso yentlama yephepha (ekuza kuba lula ukusilandela) esiza kuba yinxalenye yezinto ezikwipotfoliyo yeeprojekthi.  Chonga ingxaki wandule uxoxe ngayo .  Chonga iimpawu eziphambili zenkcazelo yendlela emayenziwe ngayo into, wandule ucacise umahluko phakathi kweenkcukacha zento emayenziwe kunye nezinto eziyimiqobo.  Xela indlela emayenziwe ngayo into ethile, wandule udwelise zonke iinkcukacha zento emayenziwe neziza kuba yinxalenye yesikhokelo/sibonelo esiza kufakwa kwipotfoliyo.  Qalisa wenze umSebenzi 2 woVavanyo oluseSikweni
15 Iphiriyodi 1 neyesi 2
16 Iphiriyodi 1 neyesi 2
5.1.2.2 5.1.5.1 5.1.5.2
Phuhlisa indlela yokuqhagamshela/yokuthetha ngezakhono zokuyila  Yazisa abafundi ngentsingiselo yala magama/mabinzana: o Isisombululo esisesinye esinokusetyenziswa o Imiqobo     Bonisa ubuchule bokuzoba into emacala-mabini. Bonisa ubuchule bokuhombisa umzobo ngokuwupeyinta. Bonisa imizekelo yeendlela-ndlela zokuphawula xa uzoba. Sebenzisa izakhono zoqhagamshelwano/ zonxibelelwano uze nezinye izisombululo ezinokusetyenziswa ezingakhabaniyo nenkcazelo yendlela emawenziwe ngayo umsebenzi, zingakhabani nazo neenkcukacha zento emayenziwe ezikwipotfoliyo.
17 Iphiriyodi 1 neyesi 2
5.1.2.3 5.1.5.1 5.1.5.2
Ukhetho lwengcamango yokuyila nokuyiphuhlisa  Yazisa abafundi ngentsingiselo yala magama/mabinzana: o Ukukhetha o Ukuzathuza o Ukuphuhlisa iingcamango  Phuhlisa imiqathango emayilandelwe xa kukhethwa ingcamango yokuyila.  Phuhlisa ingcamango ekhethiweyo usebenzisa ubuchule obufanelekileyo boqhagamshelwano/bonxibelelwano.
18 - 19 Iphiriyodi 1 neyesi 2
Phuhlisa izakhono zokwenza  Hlaziya iintsingiselo zala magama: o Ukwenza/ukuqala into ethile o ukugqibezela o khuselekileyo  Yiza namanyathelo emakalandelwe xa kusenziwa loo nto icingiweyo.  Yiza nazo zonke izixhobo ezifunekayo.  Khetha indawo efanele lo msebenzi wenziwayo, uqwalasele imiba yokhuseleko nococeko.
Vk 18 19
20 Iphiriyodi 1 neyesi 2 5.1.4.1 5.1.4.2
Phuhlisa izakhono zokuphonononga/zokuphicotha/zokujongisisa uhluze  Yazisa abafundi ngentsingiselo yala magama/mabinzana: o Jonga uhluze/phonononga/phicotha o Imveliso o imiqobo o Isicwangciso sendlela yokwenza o Ukuphucula/ukuhombisa o Utshintsho/ukuguqula
Phuhlisa imiqathango eza kulandelwa xa kuphononongwa imveliso. Lungisa nesicwangciso sendlela ekuza kwenziwa ngayo.  Phonononga iimveliso nesicwangciso sendlela ekuza kwenziwa ngayo.  Ngenisa ipotfoliyo nemveliso. UMSEBENZI 2 WOVAVANYO OLUSESIKWENI
ISHEDYULI YOMSEBENZI WETEKNOLOJI IBAKALA 5 IKOTA 3 IINDLELA-NDLELA ZOKWENZA OKUTHILE NOLAWULO LWAZO IVEKI 21 LO &amp; AS IMIGANGATHO YOHLOLO NOMXHOLO OFUNDISWAYO Umxholo: Amandla nezoThutho IMEKO ENGUMZEKELO: Amandla bubutyebi bendalo obunqabe kunene. Izinto ezininzi zisebenzisa iintlobo ngeentlobo zamandla ukuze zibe nako ukuhamba okanye ukusebenza. Izithuthi: oko kuquka, ezihamba endleleni, esiporweni nasemoyeni, zisebenzisa iintlobo ngeentlobo zamandla ukuze zibe nako ukuhamba. Ngokunjalo, namanzi ukuze atsalwe kwimijelo yamanzi enjengamadama ukusiwa kwimizi-mveliso ampontshwa ngoomatshini abasebenza ngombane. La mandla asetyenziswa ngezi ndlela asenokubuya okanye angabuyi asetyenziswe kwakhona. Yila uhlobo oluthile lwesithuthi esinokuhamba phantsi emhlabeni okanye emanzini umgama ongangeemitha ezi-5 kwindlela ethe tye, sisebenzisa uhlobo lwamandla olunokubuya lusetyenziswe kwakhona. Cacisa eli binzana &quot;ukukhethwa kwamacala&quot; ngokuphathelele ekungabini nawo amathuba okuba neemveliso zobugcisa  Xoxa ngemicimbi ephathelele kwindlela eluncedo nengeloncedo ngayo into yokuba abantu babe nezithuthi. Uphando ngoovimba bamandla asetyenziswa kwiintlobo ngeentlobo zezithuthi nendlela abathi babe nefuthe ngayo ebantwini nakokusingqongileyo  Yazisa abafundi ngentsingiselo yala magama/mabinzana: o Oovimba bamandla: anokubuya asetyenziswe kwakhona /angenakubuya asetyenziswe kwakhona o Iintlobo ngeentlobo zoomatshini o Uphuhliso lwenzululwazi o Okusingqongileyo  Chaza iintlobo ngeentlobo zezithuthi.  Chonga uhlobo lwamandla olusetyenziswa luhlobo ngalunye lwesithuthi.  Chonga imfuno abanayo abantu xa besebenzisa iintlobo ngeentlobo zezithuthi.  Chonga wandule udwelise izinto ezintle nezimbi ezithi ezi ntlobo zamandla zisetyenziswa ziintlobo ngeentlobo zezithuthi zibe nefuthe ngazo empilweni yomntu nakokusingqongileyo.  Chaza ukuba aba vimba bamandla basetyenziswa njani ukuze benze izithuthi zihambe. TG Vk 21
Iphiriyodi 5.3.3.1 1 neyesi 2
22 Iphiriyodi 1
5.1.1.1 5.1.1.2 5.2.3.1 5.3.2.1
23 Iphiriyodi 1 neyesi 2
Uphando lwenzululwazi ngemisebenzi yoovimba bamandla  Yazisa abafundi ngentsingiselo yala magama/mabinzana: o Uphando lwenzululwazi o Ukuqulunqa uphando o Ukwenza uphando o Ukuqokelela ndaweni-nye ulwazi olufumeneyo nokulutolika/nokuluhlalutya o Ukuphonononga iziphumo zophando, nokunika ingxelo ngazo o Oovimba bamandla o Iintlobo ngeentlobo zoomatshini  Qulunqa wandule wenze uphando lwenzululwazi ukuze uqonde ukuba oovimba bamandla anokubuya asetyenziswe kwakhona (njengomoya nemvula) basenza njani ukuba sihambe isithuthi.  Yiza nezixhobo zokwenza olu phando.
5.1.2.1 5.1.5.1 5.1.5.2
Bhala inkcazelo yendlela oza kuyenza ngayo into eza kuba kwipotfoliyo yeeprojekthi, wandule uphuhlise/uxele izakhono oza kuzisebenzisa xa uthetha/uqhagamshelana nabanye ngayo  Hlaziya intsingiselo yala magama/mabinzana: o Ipotfoliyo o inkcazelo yendlela oza kuyenza ngayo into  Hlaziya iimpawu zenkcazelo yendlela eza kwenziwa ngayo into.  Xoxa ngokubaluleka kwezakhono zoqhagamshelwano xa ucacisa okanye ufundisa abanye ngaloo nto uyiyilileyo.
25 Iphiriyodi 1
5.1.2.2 5.1.2.3 5.1.5.1
Phuhlisa iingcamango zokuyila (umfanekiso) wandule ukhethe ibenye kuzo  Yazisa abafundi ngentsingiselo yala magama/mabinzana: o Izisombululo ezizezinye ezinokusetyenziswa o Imiqobo o ukhetho  Yiza nezixhobo uzobe iingcamango zokuyila onazo (imifanekiso onayo) zezithuthi ezimbini. Ziphawule, uzipeyinte usebenzisa imibala okholwa yiyo.  Khetha owona mfanekiso uwuthandayo.  Zihombise ezi zithuthi, ufakele izinto ezifunekayo.  Qalisa wenze uMsebenzi 3 woVavanyo oluseSikweni.
26 Iphiriyodi 1 neyesi 2
Amalungiselelo okwenza isisombululo  Hlaziya amanyathelo aphambili emakalandelwe xa kusenziwa isithuthi. Wabonise ngokusebenzisa imizobo la manyathelo.
27 -28 Iphiriyodi 1 neyesi 2
Uphuhliso lwezakhono zokwenza okuthile  Yazisa abafundi ngentsingiselo yala magama/mabinzana: o Ukugqibezela o Cocekileyo o Khuselekileyo  Bonisa iindlela ezikhuselekileyo zokusebenzisa izixhobo.  Yiza nezixhobo ezifanelekileyo, ukhethe indawo yokusebenzela ekhuselekileyo.  Nika inkxaso epheleleyo xa kusetyenzwa/kusenziwa loo nto ithile.
Vk 27 - 28
28 Iphiriyodi 1 neyesi 2
Phonononga/Jongisisa imveliso ethile, uhlalutye nesicwangciso sendlela yokwenza oko kuthile  Yenza uluhlu lovavanyo oza kulusebenzisa xa uphonononga imveliso (umzekelo: isithuthi), noza kulusebenzisa xa uhlalutya isicwangciso sendlela oza kwenza gayo umsebenzi.  Vula ithuba lokuba kuhlolwe izithuthi ezenziweyo, kujongwe ukuba ingaba zisemgangathweni owamkelekileyo na (njengoko kuxeliwe kuluhlu lovavanyo).
29 Iphiriyodi 1 neyesi -2
Ukungeniswa kwepotfoliyo yeeprojekthi ekulula ukuzenza  Lungisa ipotfoliyo yeeprojekthi ukuze ize kuhlolwa.  Hlola imizekelo yeendlela-ndlela zokwenza into UMSEBENZI 3 WOVAVANYO OLUSESIKWENI
30 Iphiriyodi 1 neyesi 2
Phuhlisa izakhono zokuzoba  Yazisa abafundi ngentsingiselo yala magama/mabinzana: o Uvimba wamandla o Iintlobo ngeentlobo zoomatshini  Vula ithuba lokuzoba iingcamango eziguquliweyo zokuyila umfanekiso wento ethile usebenzisa izakhono zoqhagamshelwano ezichanekileyo. Bonisa ngophawu izinto ozenzileyo ukuphucula umfanekiso lowo.
ISHEDYULI YOMSEBENZI WETEKNOLOJI IBAKALA 5 IKOTA 4 IZAKHIWO/UKWAKHEKA/UBUME BENTO VK 31 LO &amp; AS 5.1.1.2 5.2.1.1 IMIGANGATHO YOHLOLO NOMXHOLO OFUNDISWAYO Umxholo: Ezezindlu IMEKO ENGUMZEKELO: Utata kaJimmy uye kwintlanganiso yezoshishino eKapa. UJimmy yena ngokunokwakhe uzithandela iintaka, kwaye uthi ingathi akasabuyi uyise eKapa kuba umthembise ngokumthengela intaka emva kolu hambo. Umana ukuzikhumbuza ukuba kanene utata wakhe uza kube sele ebuyile eKapa emva kwenyanga. Ujonge nokumothusa uyise kuba ucinga ngokube esakha indlu yentaka elungiselela into engekehli. Ukwazile noko ukugcina ama-R20.00, ngolo hlobo uya kukwazi ukuqokelela obekuza kulahlwa ukuze akhe indlu leyo yentaka. Zama ukunceda uJimmy ukusombulula ingxaki yakhe? Phambi kokuba unike impendulo yakho cinga ngoku kulandelayo: o Le ndlu yentaka mayomelele ingahexi. o Mayibe nobunzima obungange-1kg ukuze ikwazi ukuthwala ubunzima bentaka, ukutya kwayo, namanzi. o Mayibe iza kukwazi ukumelana nemozulu yamaxesha ngamaxesha onyaka, njengoko iza kuzinza egadini. Uphando ngolwakhiwo/ubume bezinto  Yazisa abafundi ngentsingiselo yala magama/mabinzana: o Isakhiwo/ukwakheka/ubume bezinto o Chonga o Phanda  Xoxa ngemeko engumzekelo, wandule uchonge eyona ngxaki ekhoyo apho (ukwakhiwa kwendlu yentaka).  Yiza nemifanekiso yeemveliso esele zikho, wandule uchonge zonke izinto eziphambili ngenkangeleko/ngembonakalo yazo. TG
32 Iphiriyodi 1 neyesi 2
Iintlobo ngeentlobo zezakhiwo/zezinto ezikumila kuthile  Yazisa abafundi ngentsingiselo yala magama/mabinzana: o Izakhiwo/ulwakhiwo/izinto ezikumila kuthile o IFreyim/umphandle wento o Iqokobhe o Qinileyo  Yenza ingcaciso ngeentlobo-ntlobo zezakhiwo/zolwakhiwo/zezinto ezikumila kuthile, wandule uzahlulahlule ngokokufana kwazo.  Xoxa ngemisebenzi yezo zakhiwo/yezo zinto zikumila kuthile zokusebenza. UMSEBENZI 4 WOVAVANYO OLUSESIKWENI Umsebenzi 1 ­ ulwahlula-hlulo/ uhlelo lwezakhiwo/lwezinto ezikumila kuthile
33 Iphiriyodi 1 neyesi 2
5.1.1.2 5.1.3.2 5.2.1.1
Phanda ngomahluko phakathi kwezixhobo nemithwalo  Hlaziya intsingiselo yala magama/mabinzana: o Ulwalamano o Izixhobo o Umthwalo  Yiza nezixhobo ezahlukeneyo ezinokuyakha into ekumila kuthile (njengendlu yentaka).  Phanda ngezixhobo ezisetyenzisiweyo ukwakha isakhiwo esithile, okanye ukwenza nantoni na ekumila kuthile yokusebenza.  Phanda ngomahluko phakathi kwezixhobo nemithwalo.
5.1.1.1 5.2.1.1 5.3.2.1
Ifuthe lophuhliso lwenzululwazi ebomini bomntu nakokusingqongileyo  Yazisa abafundi ngentsingiselo yala magama/mabinzana: o Ifuthe elihle nefuthe elibi o Izinto eziluncedo nezingeloncedo o Uphuhliso lwenzululwazi o ifuthe  Xoxa ngefuthe lophuhliso lwenzululwazi ebomini bomntu.  Zoba iingcamango ezibonisa izinto eziluncedo, ezingeloncedo, ezinefuthe elihle, nezinefuthe elibi.
35 - 36 Iphiriyodi 1 neyesi 2
5.1.2.1 5.1.2.2 5.2.1.3 5.1.3.1 5.1.3.2 5.1.3.3 5.1.5.1 5.2.1.1
Yila imveliso, wandule uyenze  Yazisa abafundi ngentsingiselo yala magama/mabinzana: o Bhala phantsi o Enye indlela/ukukhetha o Isisombululo o Ukuphawula  Yila imveliso (njengendlu yentaka).  Khetha owona mfanekiso ufanelekileyo njengesisombululo, wandule unike izizathu zokuba ukhethe wona.  Phawula umfanekiso ngeelebhile, upeyinte neendawo ezifanelekileyo kuwo.  Qulunqa indlela yokwenza imveliso ethile.  Yakha into ekumila kuthile usebenzisa izixhobo ezifanelekileyo.  Qinisekisa ukuba iindlela osebenza ngazo zicocekile kwaye azinabungozi.
Vk 35 36
37 Ixesha Iphiriyodi 1 neyesi 2
UMSEBENZI 4 WOVAVANYO OLUSESIKWENI Umsebenzi 2 ­ Uvavanyo losiba nephepha
38 Iphiriyodi 1 neyesi 2
Uphononongo / uhlalutyo lwemveliso  Buza imibuzo emalunga nabantu, injongo, nokusingqongileyo xa uphonononga imveliso.  Xelela abanye iindlela onokuyiphucula nonokuyiguqula ngazo le mveliso. KUBHALWA PHANTSI, KUNIKWE INGXELO
39 - 40 Iphiriyodi 1 neyesi 2
Vk 39 40
IPHEPHA LOKUFAKA AMANQAKU ETEKNOLOJI KUMABAKALA 4, 5, 6
IPHEPHA LOKUFAKA AMANQAKU ETEKNOLOJI
UNYAKA UMMANDLA WESIFUNDO IBAKALA: 4/5/6 IKLASI IGAMA LIKATITSHALA LO 1 Inkqubo yobuGcisa nezaKhono LO 2 Inkqubo yolwazi nokuQonda LO 3 Iteknologi, ukuhlala nokusingqongileyo
IIKHOWUDI ZOKUFAKA AMANQAKU 4 Balaseleyo (70-100%) 3 Nelisayo (50-69%) 2 Phumelele kancinci (35-49%) 1 Phumelelanga (0-34%)
UMSEBENZI 1 100 100 IK IK IK 100 IK 100 IK
S1 % S 1 UMSEBENZI 2 S 2 UMSEBENZI 3 S 3 UMSEBENZI 4 S4
IKHOWUDI YONYAKA WOKUGQIBELA
a = Ngazanga / x = Fakwanga / VX = Fakwe emva kwexesha
Umhla woVavanyo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25